Wasiir ku-xigeenka ciyaaraha Puntland Cismaan Cawad Cali oo galabta ku geeriyooday Muqdisho. – Radio Daljir
Wasiir ku-xigeenka ciyaaraha Puntland Cismaan Cawad Cali oo galabta ku geeriyooday Muqdisho.
Abriil 4, 2012 12:00 b 0
Muqdisho, April 04 ? Alle ha u naxariistee waxaa galabta magaalada Muqdisho ku geeriyooday Cismaan Cawad Cali oo ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada, shaqaalaha, dhallinyarada iyo ciyaaraha Puntland sida uu Radio Daljir u xaqiijiyey wasiirka wasaaraddaasi Cabdiweli Cabdulle Indho-guran.
Wasiirka, oo ku geeriyooday isbitaalka Aadan-cadde ee magaalada Muqdisho ayaa in muddo ah la il-darnaa xanuun xagga kalyaha ka haleelay, iyadoo dhinaca kalena ay la darseen xanuunnada dhiig-karka iyo sonkarta oo iyana ka mid ah jirooyinka haliseed.
Alle ha u naxariistee mudane Cismaan Cawad Cali, ayaa naf-baxay xilli loo qalab-qaaday qalitaan xagga kaliyaha looga samayn lahaa, iyadoo sababta ugu weyn ee dhimashadiisana dhakhaatiirtu ay ku sheegeen in ay gundhig u ahayd labadiisii kaliyood oo shaqadii joojiyey.
Madaxda wasaaraddii uu ka tirsanaa iyo mas?uuliyiin sarsare oo ka tirsan dawladda Puntland ayaa ehelkiisa iyo ummadda reer Puntland uga tacsiyeey geerida rabbi ha u raxmee Cismaan Cawad Cali.
Dhimashada wasiir ku-xigeenka, ayaa ku soo beegantay xilli maanta ay magaalada Muqdisho ay ku dhinteen labadii mas?uul ee ugu sarreeyey dhinaca guddiyada caalamiga ah ee ciyaaraha Soomaaliya, kaddib markii la qarxiyey xaflad dabaaldeg warbaahineed oo ay ka qaybgalayeen.
Dowladda Kenya oo sheegtay inay dishay 40-ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Dhismaha xaruntii hay?adda dambi-baarista Puntland oo la dhammaystiray iyo M/weynaha Faroole oo xarigga ka jiray.